धेरै फिल्म स्टारसँग रेखाको नाम जोडियो, तर एक्लै छिन रेखा !
काठमाडौँ - सन् १९५४ अक्टोबर १० मा जन्ज्मेकी रेखाले १५ वर्षको उमेरमा नै बलिउडमा डेबयू गरेकी थिइन् । उनले इन्डस्ट्रीमा निकै नै संघर्ष गर्नुपर्‍यो । उनको व्यक्तिगत जीवन तथा करिअरमा कैयौँ उतारचढाव आयो । रील लाइफ र रियल लाइफ दुबैमा रेखाले संघर्ष गरिन् । धेरै फिल्म स्टारसँग उनको नाम पनि जोडियो । नवीन निश्चलदेखि अक्षय कुमारसम्म उनको नाम जोडिएको थियो । विनोद मेहरासँग त रेखाले विवाह नै गरेकी हुन् भन्ने गरिन्छ ।
जितेन्द्रसँग पहिलो प्रेम
भनिन्छ रेखाको पहिलो प्रेम सुरुवाती चलचित्र ‘सावन भादो’ का नायक नवीन निश्चलसँग थियो । तर यासीर उस्मानले ‘रेखा : एन अनटोल्ड स्टोरी’ पुस्तकमा रेखाको पहिलो प्रेम जितेन्द्रसँग भएको दाबी गरेका छन् । तर जितेन्द्र एयरहोस्टेस प्रेमिका शोभासँग सम्बन्धमा रहेकाले रेखासँगको सम्बन्ध अगाडि बढाएनन् । त्यसैले रेखाको पहिलो प्रेम अधुरो नै रह्यो । त्यसपछि रेखा र विनोद मेहरा नजिक भए ।
विनोद मेहरासँगको विवाह !
हल्लालाई पत्याउने हो भने रेखाले विनोद मेहरासँग विवाह रेकी थिइन् । यो विवाह कलकत्तामा भएको थियो । विनोद मेहराले रेखालाई आफ्नो घर पनि लगेका थिए । तर विनोद मेहराकी आमाले कमला मेहराले रेखालाई बुहारीका रुपमा स्वीकार गरिनन् ।
कमलालाई रेखाको अतितका बारेमा थाहा भएकोले नस्वीकारेको बताइन्छ । उनलाई रेखा अविवाहित पुष्पावतीकी छोरी हुन् भन्ने कुरा थाहा थियो । त्यसैले कमलाले रेखालाई घरमै पस्न दिइनन् । यस्तो अवस्थामा विनोद मेहराले केही गर्न सकेनन् र सम्बन्ध टुट्यो । तर रेखा र विनोदको विवाहको केही प्रमाण भने छैन । रेखाले यो हल्लाको खण्डन गरेकी छन् । उनले विनोद मेहरा आफ्नो शुभचिन्तक मात्रै भएको बताएकी छन् ।
रेखा र किरणको एक सानो प्रेम कथा
विनोद मेहरासँग सम्बन्ध टुटेपछि रेखाको जिन्दगीमा जीवनका छोरा तथा एक नामी भिलेन किरण कुमार देखा परे । तर रेखासँग किरणको सम्बन्ध जीवनलाई स्वीकार थिएन । यस्तोमा किरणले पनि रेखालाई छाडिदिए ।
अमिताभ बच्चन र जया भादुरीको विाह सन् १९७३ मा भएको थियो । तर त्यसपछि पनि अमिताभ र रेखाको प्रेमको हल्ला बजारमा फैलियो । सन् १९७६ मा ‘दो अनजाने’ सुटिङको दौरानमा अमिताभ र रेखा नजिकिएका थिए । सन् १९८१ मा यश चोपडाले जया–अमिताभ र रेखाको सम्बन्धलाई लिएर ‘सिलसिला’ चलचित्र बनाए । रेखा र अमिताभले सँगै अभिनय गरेको अन्तिम चलचित्र यही थियो ।
दिल्लीका बिजनेसम्यान मुकेशसँग गरिन् विवाह
सन् १९९० मा रेखाले दिल्लीका व्यापारी मुकेश अग्रवालसँग विवाह गरिन् । अग्रवालले विवाह भएको एक वर्षमै सुसाइड गरेका थिए । विवाहको केही समयमै रेखा र मुकेशको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । रेखाले मुकेशलाई छोडेर मुम्बई आएकी थिइन् । मुकेश पनि रेखालाई पछ्याउँदै मुम्बई आए । एकदिन मुकेशले आफ्नै फ्ल्याटको पंखामा झुण्डेर आत्महत्या गरे ।
सबलाई अचमिम्त पार्दै अक्षय कुमारसँगको अफेयर
यो सन् १९९० को दशकको कुरा हो । रेखा र अक्षयको पनि नाम जोडियो । ‘खिलाडियोँके खिलाडी’ मा रेखा र अक्षय सँगै देखिएका थिए । यही चलचित्रको सुटिङको समयमा रेखा र अक्षयको अफेयर चलेको बताइन्छ । अक्षय कुमार र रेखाको सम्बन्धका बारेमा बाहिर भने त्यति धेरै कुरा आएन ।
उनको व्यक्त्तिगत जीवनका कुरालाई छाड्ने हाे भने रेखा एक सदाबहार अभिनेत्री हुन्, जसका अहिले पनि लाखाैँ फ्यान रहेका छन् । - उज्यालोबाट